Nnukwu overclocking | Site na Linux
Clona-emebiga ihe ókè
obi ike | | Noticias
Mgbe anyị mepere kọmputa, n’elu bọọdụ anyị na-ahụ onye na-akwado ya n’elu ya.
N'okpuru onye ofufe ahụ bụ processor, nke dị ka ụbụrụ nke kọmputa ahụ.
Ihe kpatara na ihe nhazi ahụ nwere nke ya bụ n'ihi na ọ ruru oke okpomọkụ, dabere na usoro nhazi ha nwere ike ịfe 70ºC.
Gịnị bụ overclocking?
Overclocking bụ usoro nke eji eme ihe nhazi ahụ na njedebe ya iji mee ka arụmọrụ ya dịkwuo elu. Enwere ike ịme ya na eserese, na RAM, wdg.
Olee nsogbu ndị nke a nwere ike ịkpata?
Ndị nhazi ahụ na-ejide ọnọdụ okpomọkụ kachasị elu, enwere ike karịa nke a karịa na overclocking.
Anyị na-agbazi ihe nhazi ahụ n'ụzọ nkịtị ma ọ bụrụ na emechara ya ugboro ugboro.
Iji zere nke a, a ga - eme ka ihe nhazi ahụ dị mma, ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume na mmiri mmiri nitrogen. Nitrogen bụ gas na-aquụ na okpomọkụ nke -195,79 ° C (63 K).
Maka nke a, mgbe ị na-ejikwa ya, ọ dị mkpa iyi uwe, ọ bụ ihe amamihe dị na ya igosipụta ihe dị ogologo n'ihi na nitrogen mmiri na-akpata ọkụ mgbe ọ na-akpọtụrụ akpụkpọ ahụ.
Ndụmọdụ m, egbula oge maka ihe abụọ:
Anyị na-eburu ihe nhazi ahụ
Ọ naghị adịkarị mkpa
Nke a bụ vidiyo nke overclocking na mmiri mmiri nitrogen:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Clona-emebiga ihe ókè
Adị m onye ọrụ Linux maka afọ ole na ole ma ugbu a ana m eji Arch ma abụ m onye na - eso ụzọ gị na ibe gị (kwa ụbọchị ị na-eleta m ụbọchị ọ bụla hehe)
M na-amụ Software Engineering, na m nwere a enyi bụ ezigbo overclocking geek.
Clonafee ihe ma ọ bụrụ na ejiri nlezianya mee ya nwere ike ọ gaghị adị oke njọ. N'ezie overclocking a processor na a isi, ihe atụ ihe android ọnụ nke mere na usoro zara ntakịrị ngwa ngwa bụ mgbe ụfọdụ bara uru. N'ezie, ndụ nke ibe mkpụmkpụ ma nke ahụ dị mkpa.
N’okwu ekwenti ọ nwere ike ịba uru karịa.
Nsogbu dị n'elu ihe niile bụ na, na ibe na-kposara
Abu m onye na - eso uzo gi oge obula (kwa ubochi i na - eleta m nleta ubochi hehe)
Ngwanụ, daalụ nke ukwuu 😀
Overclocking na-ewepụta ndụ na nhazi, mana ọ bụrụ na emee nke ọma, ọ gaghị ebugo na obere oge. Ọ bụrụ n’echiche na ọ ga-adị obere, ị ga-enweta mburu dị elu na nloghachi. Liquid nitrogen bụ usoro anụ ọhịa mara mma nke anụ ọhịa. E nwere ndị na-egwu egwuregwu dị elu na sistemụ mmiri mmiri na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ na-ebili nke ọma.
Liquid jụrụ ... Enwere m olileanya na kọmputa m ọzọ nwere ya n'ihi na ha na-ekwu na ha ka mma ma ha anaghị eme mkpọtụ
Enwere m kọmputa nke nwere ikuku gas ... nnukwu, ọ bụ ihe kacha mma 😀
Ma m na-ere ya n'ihi ihe ndị ọzọ, enweghị ego hehe.
Ọ bụ na ha anaghị eme mkpọtụ? Na fans ndị radiator na-eburu? Na mmiri mgbapụta?
Ugbu a site na ikuku ikuku ị nwere ike ime akwa anụ ọhịa mara mma, na-enweghị igwe na-ekpo ọkụ karịa ka o kwesịrị.
Ọzọkwa, na ihe meziwanye nsụgharị jụrụ oyi, ị nwere ike ịnweta PC ndị a na-adịghị ahụ anya (n'ụzọ nkịtị) ma ọ bụrụhaala na ịchọghị ịpịpụta igwe nke ukwuu, n'ụzọ doro anya.
E nwere tropo narị ihe eji eme ka mmiri jụrụ oyi, ọ bụghị ha niile nwere radiator mpụga.
Ọfọn, ọ bụghị na ha anaghị eme mkpọtụ, ha na-eme obere mkpọtụ karịa Fans ahụkarị fans
niile mmiri jụrụ mmiri nwere radiator. Ekwughị m na ọ ga-abụ mpụta. Na mba, ha anaghị eme mkpọtụ karịa ndị na - egwu egwuregwu. Tinye igwe jụrụ oyi dị mma ma ị gaghị anụ ihe ọ bụla.
The overclocking kwuru n'ụzọ dị mfe, bụ ịbawanye ibu ọkụ eletrik na-abanye na CPU, nke a ga-eme ka ọ rụọ ọrụ ngwa ngwa karịa nkịtị.
Emebeghi CPU maka nke a ... na ndabara ọ bụghị, ọ bụrụ na CPU bụ 3.0 ọ pụtara na ọ bụ 3.0, ee ... ha nwere ike iburu ya ruo 5.0 ... mana maka ndekọ ahụ, emepebeghi CPU maka nke ahụ.
Ya mere, o doro anya na nke a nwere nsonaazụ, dịka ọmụmaatụ ndụ bara uru ga-ebelata.
Mgbe ụfọdụ, ha na - eme ka elekere ihe nhazi elekere site na ụlọ ọrụ na - emewanye. Ha weputara udiri ohuru na otu nhazi ahu na otutu oso (ha na-egwu “oke” onodu oku).
Amaghị m na overclocking dị adị mana maka amara ahụ, ọ ga - akara m mma ịzụta kọmpụta dị ike karịa ma ọ bụ jiri usoro dị mfe.
Ahụghị m ojiji maka nke ahụ ma ọ bụ maka ekwentị.
Overclocking dị nnọọ ụtọ, emere m ya na 2006, uff ọ dị m ka ochie jaajaj m mere ya na AMD 64 processor yana bọọdụ na n'uche m bụ nke kacha mma n'oge ndị DFI Lanparty, otu mpempe bọọdụ maka OC M na-ahapụrụ gị njide nke afọ ndị ahụ nke ikuku m mma site n'ikuku na ezigbo ikuku ọkụ ee !! kelee unu igwe igwe !!!
uff ana m eche agadi haajaj
Ọ bụ na ị bụ.
Damn ee ị na-agafe hahaha
Nabata na ngwaike ụwa… Aga m abụ onye ndu gị…
Ọ bụ ezie na ị na-ekwu na ọ bụ ịbawanye arụmọrụ nke nhazi nke a abụghị naanị ndị nhazi ahụ, dịka aha ahụ na-ekwu, ị na-ekpuchi olu bụ ịbawanye oge elekere nke ihe, ya bụ, ịbawanye ụba na nke a metụtara ma CPU na GPU yana na RAM, wdg.
Ee ee, mana a na-eme ya ebe ahụ
Agaghị m agwa gị mba, tupu m sonye na nnọkọ overclocking na ịrụ ọrụ na GPU ma ọ bụ RAM dị ka ọrụ dị na CPU
Are ziri ezi, ị na-arụkọ ọrụ ọnụ na oge nke ebule, cpu na gpu, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị na ị nweghị ike bulite mghz na cpu, ugbu a iji mee nke a ụzọ abụọ site na ngwanrọ ma ọ bụ ozugbo na BIOS nke dịka ahụmahụ m si Nke kachasị mma, n'ezie OC a agbanweela ọtụtụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ekele gị niile
Nke a na-echetara m afọ 16 m, mgbe m nwetara ọkara kọmputa junk ma tinye OC n'ime ha, ma tinye ha ka ha rụọ ụfọdụ ụfọdụ distro ma ọ bụ windo XP.
N'ezie OC dị ize ndụ dabere na ọnụọgụ Mzh ị na-eji na karịa ihe niile, ole ka ị na-akpali Vcore, iji mee ka mhz dịkwuo mkpa karịa volta na ọkụ eletrik na-achọkwu ume na ume, ọkụ.
Ugbu a, onye nhazi m bụ Athlon II X3 nwere isi agbachi, ọ bụ X4 ugbu a wee si na 2.9 Ghz ruo 3.2 ... ọ zuru oke, ọ naghị esi na 50 Celsius na ibu zuru oke n'ihi na ọ nwere ezigbo onye na-ajụ oyi na mkpọtụ ahụ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịchọpụta ọbụna mgbe ụlọ ahụ dara jụụ ...
Ọ dị ize ndụ? Ehee, ewerela m ihe karịrị otu n’ihu, ma ọ bụrụ na ịmara otu esi eme ya, nsogbu adịghị. N'ezie, AMD na-emeghe ọtụtụ na Black Edition ha iji mee ka ha bụrụ OC nke ọma ma akụkụ dị mma nke ndị mmeri nke OC bụ AMD cpu's, ha dị ọnụ ala ma dịkwa ike.
Biko nano, di mma na ogea
Ọ bụ na enweghị m ike izere ya XD XD XD
nsu, M na-etinye na n'ime ụlọ m fuming na frothing na agadi nwaanyị na-egbu m
hahahaha, enwere m mmiri nwere mmiri ma ugbu a ọ nwere 22 ºC yana igwe ndị ahụ ugbu a echeghị m na ọ dị mkpa ịfefe
@Courage you bu onye ara? XD bụ na ị gaghị enwe ike ịnagide agụụ ka mụ na XD soro trollwar
Ọ bụ mmejọ ịgwa m nke ahụ, n'ihi na enweghị m ike ịnagide ya.
Anọ m na-atọ ọchị hahahahaha.
Emere m ya otu ihe gpu ati.
Clokwanye ụgwọ n'ụzọ mmiri adịghị adọta uche m, mụ na ndị Fans nọ ma enwere ezigbo nke ha anaghị eme mkpọtụ, ọ bụrụ na mmiri mmiri n'agbanyeghị ihe ha na-ekwu na enwere ike ịba ụba na goodbye pc hahaha, ọ ka mma na m ga-aga n'ihu na nnukwu ndị agba. Agbanyeghị na ahụghị m nnukwu mkpa overclock a pc maka nke ahụ ka mma zụta ngwa ngwa processor ma gaa 🙂.
Aghọtara m na ndị nhazi na-arụ ọrụ nke ọma karịa oge, mana echere m na ọ bụ na tiori. Ugbu a, ị ga-akpachara anya na kaadị vidiyo ndị na-ekpuchi ekpuchi nke dị ize ndụ karịa cpu na karịa ihe niile nwere ezigbo isi iyi nke ike mgbe ị na-emebiga ihe ókè, enwere obere ihe egwu ma ọ bụghị ọnụọgụ nke na-egbu onwe ya xd. Ọzọkwa ihe dị oke egwu bụ overclock akwụkwọ m na-adịghị aghọta otú e nwere ndị na-eme ya. Ezigbo isiokwu.
Kedu ihe kpatara m ga-eji tinye elekere na linux ma ọ bụrụ na ọ na-aga ngwa ngwa?
Ọ bụghị carcamal ma ọlị
Enwetara m igwe na pentium 4 ka 3.2 ghz ht iji gbaa FIFA 11, na nsonaazụ ọdachi, nke jisiri ike na-agba ọsọ ma bụrụ ezigbo ihe bụ PES 11. Ọ bụ ezie na ọ gara naanị 400mhz: p
Na hp mini, atom 1.6 ghz, agbalịrị m ịgba ọsọ FIFA 08 n'ụzọ ziri ezi, na otu 400mhz: p
ihe ha n’eme di nma ma ngosiputa dikwa nma
Zaghachi luis perez
FW Nrụpụta ihe kasị mma !!!!
[ESP] Ubunchu 03: Oge erugo mgbe ọgbakọ a na-amalite?